MADAXWEYNE KU XIGEEN ENG. CAMEY WAA WAAJIB IN UU BADBAADIYO DALKIISA SHACAKA PUNTLAND WAA RAACSAN YAHAY - Latest News Updates
MADAXWEYNE KU XIGEEN ENG. CAMEY WAA WAAJIB IN UU BADBAADIYO DALKIISA SHACAKA PUNTLAND WAA RAACSAN YAHAY
Eng. Camey waa aqoon yahan,leh waayo aragnimo maamul iyo mid siyaasadeed intaba.waxa uu madax sare ka ahaa dawlad goboleedka Puntland, isagoo kasoo qabtay jagada uu hayo oo ah madaxweyne ku xigeen. waa muwaadin u dhashay Puntland, intii uu maamulkan hayayna shacabku ku barteen go aan adag iyo maamul wanaag.
Eng.camey waa masuul uu waajib culus ka saaran yahay, samatabixinta iyo difaaca Puntalnd gaar ahaan iyo soomaaliya guud ahaan. waxaa hadaba dhawaan ka dhacaya doorasho Puntland oo isaga iyo madaxweynuhuba xilkoodii loo igmaday uu dhamaaday. Maxaa yeelay doorashadu waxay dhacaysaa inshaa allaah 8.1.2019.
Hadii qofku meel soo maamulo, koleey wanaag waajiraa intuu doonaba hala ekaadee, gaabisna waa jiraa intuu doonaba ha ahaadee,laakiin waxaan meeshaba ku jirin in siyaasigu noqdaa REERYADII CUNE! sidaa daraadeed Madaxweyne ku xigeen camey taa ma uu doonaayo. waxa uuna badalkeeda jecelyahay in xukunkii ay mudo soowadeen aan ceeb lagu sagootiyin iyo carqaladayn.
Arintan oo uu kaga fikirduwanyahay madaxweynaha xilkiisii dhamaaday ee hadana utaagan xilka marlabaad Mudane Gaas. Mudane camey ayaa aamin san in gudi laga wada tashaday oo ah dad xul ah akhyaar ah aamina ah in talo wadajir ah lagu soo xulo. maadaama waxa kani yahay masiirkii shacabka ee guud. waxaa se cajab noqotay iyo wax dadkii puntland ka argagaxeen, arinkii laysku ogaa iyo wax garadkii Eng.camey uu u arkay in ay mudan yihiin ingudiga algu daro, in isagii oon waxba laga talo galin madaxweynuhu soo saaro magacyo taxan oo uu kaligii qortay kuna sheegay gudigii arimaha doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka!
Hade hadii madaxweynihii taldii dalka maroorsanaayo,suuro galmaha in la dhawrtaa, madaxweyne ku xigeen mudane Camey maha mid cidna magan uuga ah ilaalinta danaha shacabka iyo dawlad goboleedka Puntland waajib ayaana kasaaran in uu badbaadiyaa. cid laga aqbalayaana majirto in ay qasto puntland oo xasiloon. manadhacayso in nin gaar u la cararo masiirka umada waana danbi.
Mudane camey ayaa aamin san in ay Puntland, ninkii damac ku jiro in uu soo noqdana uu si xalaal ah oo sharafleh usoo maro wadata saxda ah nasiibkiisana ka qaado, kii kalana si sharci iyo nidaam wanaagsan ah uu ugu baneeyo fursada ah in shacabku aayahooda katashadaan doortaana ciday doonaan. waxaana rabnaa ayuu yiri camey in khaatumada aan khayr ku dhamaysano,umadana aynaan ku noqon udub xujo iyo baas abuur.
Run ahaan madaxweyne ku xigeenku waa ku saxsan yahay taladan shacabkuna waa ku garabtaagan yihiin. Madaxweyne Dr Gaas waxan uu wado oo ah ninbaan uwadaa puntland ama anaa soo noqon isagoo dimuqraadiyadii iyo xoriyadiiba meesha kasaaray waa midaan cid aqbalaysaa jirin dadkuna waa soo wada jeedaa maanta. laakiin waxaan meesha ku jirin mudo meesha uu soo xukumay in uu maanta ka noqdo qaswade uu ku mudan karo ceeb iyo xabsi heer caalami ah.
Waxaa shacabka Puntland dal iyo dibadba ay rajaynayaan,20 sanadood kadib in ay arkaan doorasho leh nidaam iyo kala danbayn u dhacda si xor iyo xalaal ah u dhacada cadaalad kadibna ninkii rabi uqoray sidaa uu ku helo kursigaa loo baratamaayo. dadka Puntland iyo guud ahaan soomaaliyaba waxa wadaniyad la aanta ka dhigay,waxa galiyay kala shakiga iyo aamin darada, waxa ka qaaday kalsoonida,waxaa weeye waxaysan arag madax si cad uugu soo bandhigta cadaalad iyo sinaan iyo doorasho qofka lagu dooranaayo si xalaal ah kadib markii la arkay aqontiisa iyo kartidiisa iyo waayo aragnimadiisa.
Qabiil wax lagu doorto,iyo lacag laaluush cod lagu helo la ogaayo waa uun dhaqan duul hoogay oo hormar ka qaday aduunka, aakhirana dawo malaha hadii loo kitaabdayay. yaan la ogalaan in Puntland dariiqaa xun marto ee aan loo baahnaynba.